बिजय गच्छदारबाट पीडित भएपछि उम्मेद्वार बन्नुपर्ने बाध्यता भयो - Arunkhabar.com
प्रकाशित : १० मंसिर २०७४, आईतवार ०७:३३
कुनै बेलाकी शिक्षिका र कानून व्यवसायी Cialis Soft buy online, purchase Zoloft. नीरा भगत । अहलिे संघीय समाजबादी फोरमको तर्फबाट मोरङ क्षेत्र नं ६ को क प्रदेशबाट प्रदेश सभाको लागि उम्मेद्वार बन्नु भएको छ । उम्मेद्वार बन्नु भन्दा एक घण्टा अगाडिसम्म पनि उहाँ विजय गच्छदारसँगै हुनुहुन्थ्यो । तर अन्तिममा उहाँले विजय गच्छदारको साथ छाडेर संघीय समाजबादी फोरमबाट किन उम्मेद्वार बन्नु भयो भन्ने विषयमा अरुण खबरले गरेको कुराकानीको छोटो अंश ।
तपाँइको उम्मेद्वारी किन ?
मधेशी,महिला, पिछाडिएको क्षेत्र र किसानहरुमा रहेको विभेद अन्त गर्दै मुलुकमा आर्थिक समृद्धिका लागि नै मेरो उम्मेद्वारी हो ।
मुलुकमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भएपनि त्यसको फल अहिलेसम्म तल्लो बर्गको जनताले त्यसको फल चाख्न पाएको छैन । परिवर्तनको फल चाहे पहाडमा होस वा मधेशमा सबै ठूलाबडाले मात्र पाएका छन् । राम्रा राम्रा सबै अवसर समाजका केही सिमित बर्गले मात्र पाएका छन् । तर महिला, दलित,पिछाडिएको क्षेत्रका व्यक्तिहरु अहिले पनि राज्यको अवसरबाट बञ्चित नै छन् । त्यस्ता समुदायलाई शशक्तिकरण गरेर उनीहरुलाई राज्यको पँहुचसम्म पुर्याउन नै मैले उम्मेद्वारी दिएकी हुँ ।
तपाँइ पहिले त लोकतान्त्रिक फोरममा हुनुहुन्थ्यो, अहिले संघीय समाजबादी फोरमबाट उम्मेद्वार बन्नुभयो नि ?
बिजय गच्छदारबाट पीडित भएपछि अन्तिम घडीमा पार्टी परिवर्तन गरेर उम्मेद्वार बन्नुपर्ने बाध्यता आयो ।
कसरी पीडित हुनु भयो त ?
म थारुको छोरी भएकाले पहिले देखिनै बिजय गच्छदारसँग नजिक रहेर काम गर्दै आएकी थिए । पहिले काँग्रेसको कार्यकर्ता भएपनि मधेश आन्दोलनको समयमा मधेशको अधिकारका लागि सक्रिय रहेर काम गरे । पछि मधेशी जनअधिकार फोरम विभाजित भएपछि म पनि बिजय गच्छदारसँगै लोकतान्त्रिक फोरममा सक्रिय भए । २०७० सालको निर्वाचनमा बिजय दाईकै सल्ला अनुसार छदाखाँदाको स्थायी जागिरबाट राजिनाम दिएर लोकतान्त्रिक फोरमबाट समानुपातिक उम्मेद्वार बने तर पछि सभासद बनाउँदा पैसावाला र नातागोताका व्यक्तिलाई मात्र अबसर पाए । यस पटक पनि क्षेत्र नं ६ बाट पार्टी कमिटीबाट प्रत्यक्ष उम्मेद्वारका लागि मेरै नाम सिफारिस भएको थियो । त्यतिबेला चुम नारायणजीले आफु प्रत्यक्षमा नउठ्ने भन्दै समानुपातिकमा पाए मात्र जाने भनेर मलाई नै समर्थन गरेको हो । बिजय दाईले पनि मलाई नै उठ्नुपर्छ भन्नु भएको थियो तर पछि लोकतान्त्रिक फोरम नेपाली काँग्रेसमा विलय भएपछि चुनाव जित्ने छनक देखेर होला बिजय गच्छदारले चुमनारायणसँग पैसा खाएर मेरो नाम कटाइए छ ।
विजय गच्छदार काँग्रेसमा विलय भएपछि त मोरङमा काँग्रस बलियो भयो भन्ने दाबी छ नि ?
वास्ताविकता निर्वाचनको परिणामले देखाउँछ । विजय गच्छदारसँगै पैसावाला मात्र काँग्रेसमा गएका छन् । अरु साथीहरु केही संघीय फोरम तिर छन् भने केही एमाले लगायतका पार्टीहरुमा प्रवेश गर्दै छन् । भर्खरै मात्र तपाँईले देखिसक्नु भयो भिमराज राजबंशी लगायताक व्यक्तिहरुको ठूलो समुह एमाले प्रवेश गरिसकेका छन् । अरु थारुहरु पनि यस पालि गच्छदारको लैलैमा लागेर काँग्रेसलाई भोट हाल्दैनन् । विजय आएपछि सबै थारुको भोट काँग्रेसमा आउँछ भनेर कसैले सोचेको छ भने त्यो दिवासपना मात्र हो । बिजय गच्छदार आफै सुनसरीमा चुनाव हार्दै छन् । उसले अरुलाई के जिताउँछन् । कहिले मधेशी, कहिले थारु र कहिले काँग्रेसको कुरा गर्ने विजय गच्छदार आफै पत्रु बन्दैछन् । अब उसलाई थारुहरुले नै विश्वास गर्न छाडिसकेका छन् ।
विराटनगर, १७ मंसिर । प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जीवन शैलीका कारण...